Nosy mpizahatany iray no nihevitra fa ahiana atahorana hohanin'ny antsantsa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nosy mpizahatany iray no nihevitra fa ahiana atahorana hohanin'ny antsantsa
sary 16 1
Ny frantsay Nosy La Réunion, miorina ao amin'ny Ranomasimbe Indianina izao dia lasa toerana atahorana indrindra hihaonana amin'ny antsantsa. Roa ao anatin'ny herinandro iray ao amin'io toerana io ihany dia nanjary risika mahafaty ho an'ireo mpizahatany te-hilomano amin'ny morontsiraka Réunion. Ny rantsambatan'ireo mpitsidika, mbola niaraka tamin'ny peratra mariaziny, dia hita tao anaty antsantsa tigra tratra avy teo amin'ny nosy paradisa.
Andriamatoa Turner, mpiasa iray misoratra anarana avy any Saughton, UK dia nanjavona raha snorkeling tany amin'ny Ranomasimbe Indianina nandritra ny fialantsasatra niaraka tamin'ny vadiny. Lehilahy roa no namoy ny ainy teo amin'ilay toerana ahatahorana ilay sakaizan'i Edinburgh nohanin'ny antsantsa. Lehilahy roa salama, samy mpilomano faran'izay tsara, no maty tao anatin'ny herinandro.
Maty maty Andriamatoa Turner rehefa nofaohin'ny ranomasina izy rehefa notafihin'ny antsantsa ary nohanin'ny biby. Tsy hita ny fatin'i Turner.
Ny fitsapana ADN dia nanamafy fa ny tànana hita tao anaty antsantsa dia an'Andriamatoa Turner fa ny manamboninahitra forensika dia mbola tsy afaka milaza na antsantsa iray no nahafaty azy na maty maty izy talohan'ny nihinanana azy.
Dr. Craig O'Connell, manam-pahaizana amerikanina, dia nilaza fa ny antsantsa tigra dia fantatra fa mpanao sinto-mahery.
Nosy Réunion, departemanta frantsay any amin'ny Ranomasimbe Indianina, dia fantatra amin'ny vatan'ny volkano, ala mando, haran-dranomasina ary morontsiraka.
800 kilometatra atsinanan'i Madagascar ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, ny nosy tropikanina Réunion dia mandrafitra ny Nosy Mascarene, miaraka amin'ireo nosy Mauritius sy Rodrigues. Réunion sy Mayotte no hany departemanta frantsay any amin'ny hemisphere atsimo. Réunion dia 9,180 XNUMX kilometatra miala an'i Paris. Miaraka amin'ireo ala tropikaly, volkano marobe ary fambolena fary i Réunion, dia nosy tena miloko.
Haingana ny mpitsidika mahita ny fiangaviana azy: niroborobo ny fizahan-tany nandritra ny taona maro. Mirehareha ny isan'ny mponina isam-poko (ny tantarany dia nahita olona miova tsy tapaka miovaova), karazana biby sy zavamaniry maro karazana (hazo voaniho, zavamaniry lavanila, hazo manga, ary ahitra manitra manitra) ary toerana manan-danja indrindra ao amin'ny ny atsimo andrefan'ny Ranomasimbe Indianina. Faritany frantsay hatramin'ny 1638 dia tonga departemanta frantsay i Réunion tamin'ny 1946.
Miaraka amin'ny velarantaniny 2512 kilometatra toradroa dia manana 210 kilometatra morontsiraka tsy azo ihodivirana ny nosy, na dia 25 kilaometatra ny fasika fotsy ary 14km ny morontsiraka fasika mainty any andrefan'ny nosy. Réunion dia tsy manome fialofana voajanahary ho an'ny fandehanana ankoatry ny Bay of Saint Paul. Manana faritra volkano roa izy io.
Any avaratra andrefana, ny Piton des Neiges (3,069 metatra) dia tsy mahita ny kaldera telo an'ny Cilaos, Salazie, ary Mafate izay manodidina azy. Ity tanàna farany ity, misy olona 700, dia tsy azon'ny fiara aleha. Ireo fiovan'ny tany ireo dia vokatry ny fianjerana sy fikaohon'ny sisin'ilay volkano taloha. Any atsimo atsinanana, ny Piton de la Fournaise (2,631m) dia volkano mpiaro mavitrika. Volkano masiaka indrindra izy io, izay mipoaka intelo isan-taona - fizahana izay ankafizin'ny mponina hatrany. Ny Plaine des Cafres sy ny Plaine des Palmistes izay mivondrona ao amin'ny Col de Bellevue dia mampifandray ireo tambabe roa an'ny Piton des Neiges sy ny Piton de la Fournaise.
Ny endrik'ilay nosy, izay miaina oram-be mandritra ny orana noho ny toetrandro tropikaly (eo anelanelan'ny 2,600 sy 4,000 mm atsinanana hatramin'ny novambra ka hatramin'ny aprily), dia niteraka ny lohasaha sy renirano tsy tambo isaina izay avy amin'ny tampon'isa, misy lohasaha mideza sy faritra mangina kokoa, feno vato ary, amina tranga sasany, riandrano sy dobo mahafinaritra. Ny fikaohon-tany any Réunion no anisan'ny goavana indrindra eto an-tany; Tsy azo ovaina izy io ary mamolavola ny endrika sy topografia an'ny nosy.
Ny ilany atsinanana sy be rivotra an'ny nosy dia misy rotsakorana marobe ary onenan'ireo renirano isan-karazany (ny Mât, Marsouins, ary ny renirano atsinanana), mifanohitra amin'ireo tany maina amin'ny morontsiraka andrefan'ny fialofana. Ny zavamaniry ao Réunion, izay misy karazana endemika maro dia miova amin'ny haavony sy ny toetrandro: ala tropikaly sy savannah maina, fambolena fary ary hazo fihinam-boa. Ny ala dia fonenan'ireo hombo hazo hafahafa sy vorona maro loko mahafinaritra.
Nosy Réunion dia ao amin'ny Vondronosy Nosy Vanilla.
Fiaramanidina miaraka amina olona 196 ao anaty sambo may ao amin'ny seranam-piara-manidina Sharm El Sheikh any Egypte
Geoffrey Lipman dia manatevin-daharana ny Birao Afrikana momba ny fizahantany ao amin'ny Circle